Coronavirus: Dadka ka caafimaaday Covid-19 oo dhiiggooda la isticmaali doono | Berberanews.com
Home WARARKA Coronavirus: Dadka ka caafimaaday Covid-19 oo dhiiggooda la isticmaali doono
NHSBT waxay hadda u soo dhowaaneysaa bukaannada ka soo kabtay Covid-19, si ay u eegaan haddii dhiigga Plasma – dheecaanka aan midabka lahayn ee dhiigga ka mid ah – ee laga qaado dadka ka caafimaaday kaas oo la siin karo kuwa weli la xanuunsan coronavirus.
Qoraal ka soo baxay hay’adda caafimaadka ayaa lagu yiri: “Waxaan saadaalinaynaa in marka hore la tijaabin doono si dawo degdeg ah loogu heli fayraska Covid-19.
“Haddii si buuxda loo oggolaado, tijaabooyinka waxaa lagu eegi doonaa in haddii dheecaanka qofka caafimaaday lala xiriirin karo xawaaraha bukaan-socodka Covid-19 ee soo-kabashada iyo fursadaha badbaadada haysta”.
“Dhammaan tijaabooyinka caafimaad waa inay raacaan hannaan adag oo oggolaansho ah, si loo ilaaliyo bukaanka loona hubiyo in natiijooyinka adag la soo saaro. Waxaan si dhow ula shaqeyneynaa dowladda iyo dhammaan qeybaha ay quseyso si aan ugu dhaqaaqno hannaanka ansixinta sida ugu dhaqsaha badan, uguna macquulsan.”
Wuxuu yiri: “Waan niyad jabi lahaa, haddii aanan arki lahayn bukaannada qaarkood oo qaadanaya qaabkan daaweynta toddobaadyo gudahood. Aynu rajeyno in tijaabada qaran ee NHSBT ay si dhaqso leh u dhaqan gasho.”
Wuxuu yiri, “Britain waxa ay si tartiib tartiib ah ugu dhaqaaqday in ay tijaabiso daawada.
“Waxaan u maleynayaa inay jiraan dhinacyo badan oo cudurka safmarkan ah oo aan dib u eegi doonno, aana dhihi karo, Waxaan la yaabanahay sababta aynaan dhaqso ugu dhaqaaqin. Waxaan u malaynayaa in ay tani ka mid noqon karto kuwaas”.
Wuxuu sheegay: “Waxyaabaha aan ku barannay toddobaadkii ugu horreeyay ee maamulka ayaa ah, in aysan jirin calaamado nabadgelyo oo waaweyn oo soo ifbaxay iyo maareynta wax soo saarka oo aan u muuqan in ay keeneyso saameyn aan la filaneyn.
Wuxuu sheegay in daaweynta “adag tahay diyaarna tahay.
“Waxaa jira waxyaabo badan oo aynaan ka fahmin dhiiggan Cas. Waxaan baran doonnaa waxyaabo badan oo ku saabsan waxa ku jira dhiiggaas, waxyaabaha uu ka kooban yahay, heerarka ka hortagga jira, iyo xaqiiqooyin kale oo dhici kara inta lagu guda jiro toddobaadyada soo socdaan.
“Balse marmarka qaarkood, dhakhtar ahaan, kaliya waa inaad isku daydaa inaad tallaabo u qaaddo yoolka, marka aad gacanta ku dhigto.”
Bruce Sachais, oo ah sarkaalka ugu sareeya caafimaadka ee Xarunta Dhiiga ee New York, ayaa yiri: “Dadka wax cajiib ah ayey sameeyeen, waxayna imaanayaan ayagoo koox-koox ah.
“Waxaan heynaa boqollaal iyo boqolaal deeq bixiyeyaal ah, waxaana awoodnay inaan durba uruurinno wax kabadan 1,000 cutubyo”.
Runtii waa qalbi-diirnaan in la arko in dadka uu ku dhacay cudurka, heerar kala duwan, welwelkooda ugu weyni uu yahay ‘sidee baan hadda u caawin karnaa kuwa kale?”
Balse, halka xulashooyinkayga daaweynta coronavirus ay aad u kooban yihiin, in haddana rajadu tahay inay caawin karto illaa la helo tallaal
Previous article“Gacanta Hala Saaro Beesha Nabada Jabisa” La Taliyaha Madaxweynaha
Next articleSomaliland oo dabooli doonta nolol-maalmeedka 60 kun oo qoys